Dhibaatada Ingiriisiga ah: Guddoomiyaha Waqooyiga Galbeed oo Beeniyay Weerarkii Milatari ee Dadka Rayidka ah - Teles RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Dhibaatada Ingiriisiga ka taagan: Maamulaha Waqooyiga Galbeed wuxuu diidey weerarka militariga ee dadka rayidka ah ee Meluf
Guddoomiyaha Gobolka Waqooyi-Galbeed, Adolphe Lele Lafrique, ayaa dhaleeceeyay weerarradii millatari ee ka dhacay Meluf, Bui Division, taasoo keentay dhimashada shan qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan hal qof oo naafo ah.
War saxaafadeed ay soo saartay April 11, Guddoomiyaha Gobolka Lele ayaa sheegay in xogtu ay ahayd mid been ah oo loogu talagalay in lagu mamnuuco dadaalka dhabta ah ee xukuumadda si dib loogu soo celiyo degaanka.
Waxa uu xusuusiyay dadweynaha in markii la aasaasay dowladdii Guddiga Hubinta, Dib-u-habeynta iyo Dib-u-dhiska, dhallinyaro badan ayaa ka tagay hubkooda, halka qaarkood ay sii wadi doonaan weerarrada ciidamada dawladda iyo in ay geystaan ​​dambiyo ka dhan ah rayidka.
War saxaafadeed uu soo saaray ayuu ku sheegay in ciidamada ammaanku ay bartilmaameed u yihiin goobaha qarxa ee kala go'a dadka rayidka ah, ee aan ahayn rayidka, halka militarigu marwalba tababar u siiyay. Waxa uu ku booriyay dadka isticmaala warbaahinta bulshada in ay xakameeyaan macluumaadka ay ku baahiyaan meheradaha si loo siiyo nabad, amni iyo xasilooni fursad ay ku yeelato Waqooyi Galbeed.
Human Rights Watch (HRW) ayaa Isniintii sheegay in askarta, gendarmayaasha iyo xubno ka tirsan Golaha Ammaanka ee degdega ah ee Cameroon (BIR) ay weerar ku qaadeen tuulada Meluf ee Waqooyiga Galbeed April April 4. 2019. Warbixinta ayaa muujinaysa in ciidamada dawladda ay ku dhinteen shan qof oo rayid ah, oo ay ku jirto mid maskax ahaan naafo ah, iyo dumar hal dhaawac ah.
Waxaa sidoo kale la ogaaday in saddex ka mida jirka lagu helay googo'an, oo uu ku jiro midkii la gooyey. Ka dib weerarrada, kooxdu waxay ku baaqday mas'uuliyiinta Cameroon in ay baaraan ciidamada amniga ee dalka taas oo lagu soo oogay dilalka iyo in lagu xukumo kuwa mas'uulka ka ah.
Weerarka Meluf, tuulo ku taal qaybta waqooyi-galbeed ee dalka, ayaa ku khasabtay dad badan oo rayid ah in ay u cararaan duurka. "Ciidammada dowladda waxay xadgudub ku sameeyaan dadka ku nool gobollada Ingiriisiga ee Cameroon", ayuu yiri Lewis Mudge, agaasimaha Central Africa ee Human Rights Watch.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/14/crise-anglophone-le-gouverneur-du-nord-ouest-dement-lattaque-des-civils-par-les-militaires-a-meluf/